Indima yeBhodi yoLawulo ngamaxesha obunzima | Law & More B.V.
Blog » Indima yeBhodi yoLawulo ngamaxesha obunzima
Indima yeBhodi yoLawulo ngamaxesha obunzima
Ukongeza eyethu inqaku ngokubanzi kwiBhodi yoLawulo (apha emva kwe-'SB '), sithanda ukugxila kwindima ye-SB ngamaxesha obunzima. Ngamaxesha obunzima, ukukhusela ukuqhubeka kwenkampani kubaluleke ngakumbi kunangaphambili, ukuze kuthathelwe ingqalelo ebalulekileyo. Ngokukodwa ngokubhekisele koovimba benkampani kunye nemidla eyahlukeneyo ye abachaphazelekayo ukubandakanyeka. Ngaba indima ebaluleke ngakumbi ye-SB iyavakala okanye iyafuneka kule meko? Oku kubaluleke ngokukodwa kwezi meko zangoku nge-COVID-19, kuba le ngxaki inefuthe elikhulu ekuqhubekekeni kwenkampani kwaye le yinjongo ekufuneka iqinisekiswe yibhodi kunye ne-SB. Kweli nqaku, sichaza ukuba isebenza njani le ngamaxesha obunzima njengaleyo ikhoyo ngoku. Oku kubandakanya amaxesha obunzima achaphazela uluntu luphela, kunye namaxesha abalulekileyo enkampani uqobo (umzekelo, iingxaki zemali kunye nokuthatha).
Umsebenzi osemthethweni weBhodi yoLawulo
Indima ye-SB ye-BV kunye ne-NV ibekwe kumhlathi 2 wenqaku 2: 140/250 leDCC. Eli lungiselelo lifundeka ngolu hlobo: “Indima yebhodi yokongamela kukuba ku jongana imigaqo-nkqubo yebhodi yolawulo kunye nemicimbi ngokubanzi yenkampani kunye namashishini ayo. Iya kunceda ibhodi yolawulo ngengcebiso. Xa besenza imisebenzi yabo, abalawuli abongameleyo baya kukhokelwa ngu umdla wenkampani kunye neshishini elidibeneyo. ” Ngaphandle kwengqwalaselo ngokubanzi yabalawuli bolawulo (umdla wenkampani kunye neshishini elihambelana nayo), eli nqaku alitsho nto malunga nokuba ukonganyiswa okuphuculweyo kufanelekile.
Ukucaciswa ngakumbi kwendima eyandisiweyo ye-SB
Uncwadi kunye nomthetho wamatyala, iimeko apho kufuneka kubekwe esweni ziye zachazwa. Umsebenzi wokuphatha uxhalabisa ikakhulu: ukusebenza kwebhodi yolawulo, iqhinga lenkampani, imeko yezemali, umgaqo-nkqubo wobungozi kunye ukuthobela nomthetho. Ukongeza, uncwadi lubonelela ngeemeko ezithile ezinokuthi zenzeke ngamaxesha obunzima xa olo lawulo kunye neengcebiso zinokuqiniswa, umzekelo:
Imeko embi yezemali
Ukuthobela umthetho omtsha wengxaki
Utshintsho lwesicwangciso (somngcipheko)
Ukungabikho kwimeko yokugula
Kodwa kubandakanya ntoni oku kubekwa esweni? Kucacile ukuba indima ye-SB kufuneka idlule ngaphaya kokuqinisekisa umgaqo-nkqubo wezolawulo emva komsitho. Ukubeka iliso kunxulunyaniswa kakhulu neengcebiso: xa i-SB isongamela isicwangciso sexesha elide kunye nesicwangciso somgaqo-nkqubo sabaphathi, kungekudala siza kunika iingcebiso. Ngokuphathelene noku, indima enenkqubela phambili ikwabekelwe i-SB, kuba ingcebiso ayifuni kunikwa kuphela xa abaphathi beyicela. Ngokukodwa ngamaxesha obunzima, kubaluleke kakhulu ukuhlala ngaphezulu kwezinto. Oku kunokubandakanya ukujonga ukuba ingaba umgaqo-nkqubo nesicwangciso-qhinga siyahambelana na nemeko yangoku neyexesha elizayo yezemali kunye nemimiselo yezomthetho, ukuvavanya ngokunzulu ukufuna kohlengahlengiso kunye nokunika ingcebiso eyimfuneko. Okokugqibela, kubalulekile ukuba usebenzise ikhampasi yakho yokuziphatha kwaye ngakumbi ukubona izinto zomntu ngaphaya kwemiba yezemali kunye nomngcipheko. Umgaqo-nkqubo wenkampani kwezentlalo udlala indima ebalulekileyo apha, kuba ayisiyiyo inkampani kuphela kodwa nabathengi, abasebenzi, ukhuphiswano, abathengisi kwaye mhlawumbi noluntu lonke lunokuchaphazeleka kule ngxaki.
Imida yokuvavanywa okwandisiweyo
Ngokusekwe koku kungentla, kuyacaca ukuba ngamaxesha kaxakeka kungalindeleka indima ebaluleke kakhulu ye-SB. Nangona kunjalo, bobuphi ubuncinci kunye nemida ephezulu? Emva kwayo yonke loo nto, kubalulekile ukuba i-SB ithathe inqanaba elifanelekileyo loxanduva, kodwa ngaba kukho umda woku? Ingaba i-SB ingayilawula inkampani, umzekelo, okanye ngaba kusekho ukwahlulwa okungqongqo kwemisebenzi apho ibhodi yezolawulo kuphela inoxanduva lokulawula inkampani, njengoko kubonakala kwi-Dutch Civil Code? Eli candelo libonelela ngemizekelo yendlela izinto ekufuneka zenziwe kunye nekungafuneki ukuba zenziwe, ngokusekwe kwinani leenkqubo phambi kweGumbi leShishini.
I-OGEM (ECLI: NL: HR: 1990: AC1234)
Ukuze unikeze imizekelo yendlela i-SB engafanele isebenze ngayo, siza kuqala sikhankanye imizekelo evela kwinto eyaziwayo I-OGEM ityala. Eli tyala lalichaphazela inkampani yamandla eyonakeleyo kunye neyokwakha, apho abanini zabelo kwinkqubo yokubuza babuza i-Enterprise Chamber ukuba ingaba zikhona na izizathu zokuthandabuza ulawulo olufanelekileyo lwenkampani. Oku kungqinwe liGumbi loshishino:
“Ngokunxulumene noku, i-Enterprise Chamber ithathe njengenyaniso eqinisekisiweyo ukuba ibhodi yesuphavayiza, ngaphandle kwemiqondiso efikelele kuyo ngeendlela ezohlukeneyo nekufanele ukuba ibinike isizathu sokufuna ulwazi oluthe kratya, khange aphuhlise naliphi na inyathelo malunga noku kwaye akazange angenelele. Ngenxa yoku kushiywa, ngokwe-Enterprise Chamber, inkqubo yokwenza izigqibo ikwazile ukwenzeka ngaphakathi e-Ogem, ekhokelele kwilahleko enkulu ngonyaka, ethe ekugqibeleni yafikelela kwi-Fl. Izigidi ezingama-200, eyindlela yokungakhathali yokwenza oko.
Ngolu luvo, i-Enterprise Chamber ivakalise into yokuba ngokubhekisele kuphuhliso lweeprojekthi zokwakha ngaphakathi e-Ogem, kwathathwa izigqibo ezininzi apho Ibhodi yokujonga i-Ogem khange ayenze okanye ayizalisekisanga ngokufanelekileyo indima yayo yokujonga, ngelixa ezi zigqibo, ngokubhekisele kwilahleko ezikhokele ezi projekthi zokwakha, zazibaluleke kakhulu ku-Ogem. "
ILaurus (ECLI: NL: GHAMS: 2003: AM1450)
Omnye umzekelo wolawulo gwenxa olwenziwe yi-SB ngamaxesha obunzima ngu ILaurus ityala. Eli tyala lalibandakanya ikhonkco levenkile enkulu kwinkqubo yokulungiswa ngokutsha ('i-Operation Greenland') apho iivenkile ezingama-800 zaziza kuqhutywa phantsi kwendlela enye. Ukuxhaswa ngezimali kwale nkqubo ubukhulu becala bekungaphandle, kodwa bekulindelwe ukuba kuphumelele ngokuthengisa izinto ezingezizo ezisisiseko. Nangona kunjalo, oku akuzange kuhambe njengoko bekucwangcisiwe kwaye ngenxa yentlekele emva kwenye, inkampani kuye kwanyanzeleka ukuba ithengiswe emva kokubhengezwa njengongenamali. Ngokwe-Enterprise Chamber i-SB kufanele ukuba ibisebenza ngakumbi kuba yayiyiprojekthi enamabhongo kwaye inobungozi. Umzekelo, babenyule usihlalo webhodi ephambili ngaphandle Ivenkile amava, bekufanele ukuba anamaxesha okulawula acwangcisiweyo okuphumeza isicwangciso seshishini kwaye bekufanele ukuba basebenzise ukongamela okungqongqo kuba yayingekuko ukuqhubeka komgaqo-nkqubo ozinzileyo.
I-Eneco (ECLI: NL: GHAMS: 2018: 4108)
Kwi Eneco Ityala, kwelinye icala, bekukho enye indlela yolawulo gwenxa. Apha, abanini zabelo bakarhulumente (ababebumbene badibanise 'ikomiti yabanini zabelo') bafuna ukuthengisa izabelo zabo ngolindelo lokuba babucala. Kwakukho ukungavisisani phakathi kwekomiti yezabelo kunye ne-SB, naphakathi kwekomiti yezabelo kunye nabaphathi. I-SB ithathe isigqibo sokulamla neKomiti yaBanini-zabelo ngaphandle kokubonisana neBhodi yoLawulo, emva koko bafikelela kwisivumelwano. Ngenxa yoko, kwavela ukungavisisani okungakumbi ngaphakathi kwenkampani, ngeli xesha phakathi kwe-SB kunye neBhodi yoLawulo.
Kule meko, i-Enterprise Chamber igwebe ukuba isenzo se-SB sikude kakhulu kwimisebenzi yolawulo. Ukusukela oko umnqophiso wabanini zabelo u-Eneco wathi kufanele kubekho intsebenziswano phakathi kwe-SB, iBhodi yoLawulo kunye nabanini zabelo ekuthengisweni kwezabelo, i-SB bekungavumelekanga ukuba ithathe isigqibo ngalo mbandela ngokuzimeleyo.
Eli tyala ke ngoko libonisa elinye icala lembonakalo: ugculelo alugcini nje ngokungenzi kodwa luyakwazi nokuthatha indima esebenzayo (yolawulo). Yeyiphi indima esebenzayo evumelekileyo kwiimeko zobunzima? Oku kuxoxwa ngolu hlobo lulandelayo.
I-Telegraaf Media Groep (ECLI: NL: GHAMS: 2017: 930)
Eli tyala lichaphazela ukufunyanwa kweTelegraaf Media Groep NV (apha 'TMG'), inkampani eyaziwayo yemithombo yeendaba egxile kwiindaba, ezemidlalo kunye nokuzonwabisa. Kwakukho abagqatswa ababini ekuthatheni eli phulo: I-Talpa kunye nequmrhu le-VPE kunye neMediahuis. Inkqubo yokuthabatha yayihamba kancinci ngolwazi olungonelanga. Ibhodi yayijolise ikakhulu kwiTalpa, eyayingavisisani nokwandisa ixabiso lezabelo ngokwenza i inqanaba lokudlala. Abanini zabelo bakhalaza ngale nto kwi-SB, eyazidlulisela ezi zikhalazo kwiBhodi yoLawulo.
Ekugqibeleni, ikomiti yeqhinga yasekwa yibhodi kunye nosihlalo we-SB ukuba iqhubeke nothethathethwano. Usihlalo wayenevoti yokuvota kwaye wagqiba kwelokuba axoxisane nequmrhu, kuba kwakungeke kwenzeke ukuba uTalpa abe sisininzi sabanini zabelo. Ibhodi yenqabile ukusayina umthetho olandelwayo wokudityaniswa kwaye ke ngoko wagxothwa yi-SB. Endaweni yebhodi, i-SB isayina umthetho olandelwayo.
UTalpa akazange avumelane nesiphumo sokuthathwa kwakhe kwaye waya kwi-Enterprise Chamber eyokuphanda umgaqo-nkqubo we-SB. Ngokoluvo lwe-OR, izenzo ze-SB zazifanelekile. Kwakubaluleke ngokukodwa ukuba i-consortium yayiya kuhlala isona sabelo sabelo kwaye ukhetho lwaluya kuqondakala. Igumbi loShishino livumile ukuba i-SB iphulukene nomonde kubaphathi. Ukwala kwebhodi ukusayina umgaqo wokudibanisa bekungekho kumdla wenkampani ngenxa yeengxaki ezivele kwiqela le-TMG. Ngenxa yokuba i-SB iqhubekile ngokunxibelelana kakuhle nabaphathi, khange iwugqithe umsebenzi wayo wokunceda iimfuno zenkampani.
Emva kwengxoxo yeli tyala lokugqibela, kungafikelelwa kwisigqibo sokuba ayipheleli kwibhodi yolawulo, kodwa nakwi-SB inokudlala indima ebonakalayo ngexesha lobunzima. Nangona kungekho mthetho uthile ubhubhane we-COVID-19, ungagqitywa ngokwesisigwebo esikhankanywe apha ngasentla ukuba i-SB kufuneka idlale ngaphezulu kwendima yokuphonononga nje ukuba imeko ziphume ngaphandle komda imisebenzi yesiqhelo yeshishini (I-OGEM Kunye neLaurus). I-SB inokuthi ithathe inxaxheba ekuthatheni isigqibo ukuba umdla wenkampani usemngciphekweni, ukuba nje oku kwenziwa ngentsebenziswano nebhodi yolawulo kangangoko kunokwenzeka, oku kulandelwa kukuthelekisa phakathi Eneco kwaye TMG.
Ngaba unayo nayiphi na imibuzo malunga nendima yeBhodi yoLawulo ngamaxesha obunzima? Ke nceda unxibelelane Law & More. Amagqwetha ethu anezakhono eziphezulu kwicandelo lomthetho wamashishini kwaye bahlala bekulungele ukukunceda.
Post edlulileyo IBhodi yoLawulo
Post Next Isivumelwano selayisensi
Ifomu ithunyelwe. Enkosi.